WARBIXIN: Valverde Oo Helay Sabab Uu Ku Qoslo Iyo Seddex Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii Ay Barcelona Guuldarada Ka Soo Gaartay Valencia | Laacib.net
WARBIXIN: Valverde Oo Helay Sabab Uu Ku Qoslo Iyo Seddex Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii Ay Barcelona Guuldarada Ka Soo Gaartay Valencia
January 25, 2020 Balaleti Comments Off on WARBIXIN: Valverde Oo Helay Sabab Uu Ku Qoslo Iyo Seddex Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii Ay Barcelona Guuldarada Ka Soo Gaartay Valencia
Barcelona ma aysan helin weli isbedelkii ay dooneysay tan iyo markii ay ceyriyeen tababare Ernesto Valverde, halka ay sidoo kale tabayaan weeraryahanka ka dhaawacmay ee Luis Suarez.
Waxaan eegi doonaa seddex waxyaabood oo aan ka baranay kulankii maanta ee Mestalla Stadium
Valverde Oo Helay Sabab Uu Ku Qoslo
Seddex kulan oo uu tababaraha cusub Quique Setien hogaamiyay Barcelona waxaa weli taagan walaacii ay Barcelona qabtay, waana uu sii kordhayaa.
Seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee ay kooxda Catalans ciyaartay ma aysan aheyn kuwa wacdarro dhigay, waxay si ciriiri ah uga badiyeen Granada iyo kooxda heerka seddexaad ee Ibiza ka hor inta aysan ku kufin Mestalla Stadium.
Waa run in Barcelona ay kubada heysato in ka badan intii ay heysan jireen markii uu Valverde tababaraha u ahaa, laakiin kooxda ayaa noqoto ilko la’aan sida ka muuqatay kulankii Valencia, waxay kaliya ku tiirsan yihiin in Messi uu hal mar mucjisadiisa la soo baxo, maantana wuu awoodi waayay.
Daafaca Barcelona Waa Fashil
Daafcyada dhexe ee Barcelona ma aha kuwa caga badan ku taagan sidii ay berri ahaan jireen, waxaa haatan sii kordhaya qaladaadka uu sameeyay daafaca dhexe Gerard Pique oo ay da’da ka daba imaaneyso iyo inuu ku mashquulsan yahay ganacsiyadiisa kala duwan.
Wuxuu galay rigoore oo uu madax furtay goolhaye Ter Stegen, kubad bixin xun uu sameeyay ayaana sabab u noqotay goolkii koowaad ee uu iska dhaliyay Jordi Alba, halka uu boos qaldan taagnaa goolkii labaad ee Maxi Lopez.
Sidoo kale Samuel Umtiti weli dib uma helin qaab ciyaareedkii lagu yaqaanay waxaana dilooday dhaawacyadii uu in muddo ah la maqnaa. Tababare Setein ayaa u baahan inuu daafacyadiisa adkeeyo islamarkaana uu dib u eegis ku sameeyo sida uu u isticmaalayo Busquets.
Tababare Valverde ayaa Busquets ka dalban jiray inuu baaqi ku ahaa daafacyada dhexe hortooda mar kasta oo ay Barcelona kubada heysato si uu uga difaaco kubadaha rogaalceliska ah, laakiin Setien ayaa fasax u siiyay Busquets inuu si xor ah ugu dhaqdhaqaaqo khadka dhexe oo uu weerarka caawiyo.
Ansu Fati ma bedeli karo Suarez
Inkastoo xiddiga 17 sanno jirka ah uu wacdarro dhigayay bilowgii xilli ciyaareedkan, waxaa haatan soo baxday inuu xaqiiqdii yahay 17 sanno jir, taasoo aan u la jeedo inuusan laheyn khibrad uu ka garab ciyaaro xiddigaha waa weyn ee ku gaaf wareegsan sida Messi iyo Griezmann.
Barcelona waxay si weyn u tabtay Luis Suarez oo dhaawac ka ahaa kaasoo ahaa ilkahooda, madaama uu maqnaanayo inta ka harsan xilli ciyaareedkan waxay u baahan yihiin bedelkiisa saxda ah.
Midkoodna Ansu Fati ama Carles Perez ma bedeli karaan Suarez. Barcelona waxay u baahan tahay inay dedejiso heshiiska ay ku soo qaadaneyso weeraryahanka Valencia Rodrigo kaasoo keyd la dhigay kulankii caawa.